Cishe ngamunye wethu uke wezwa ukuthi kukhona gel amabhethri. Wonke umuntu athi kuphumelela kakhulu futhi babe eziningi eziwusizo. Naphezu kweqiniso lokuthi ibhethri enjalo iminyaka engaphezu kwengu-30, baye bathola ethandwa kakhulu namuhla. Kodwa uma cisho wonke umuntu wezwa umkhiqizo elinjalo, akusiyo wonke umuntu oye wabona idivayisi asebenzayo. Ukuze okungenani ukuqonda okuthile, udinga ukufunda izibuyekezo. Gel ibhethri - kunzima kakhulu isihloko ezibanzi ongakhuluma ngazo, ngakho ake sibheke konke ukuze.
Uyini umahluko kusuka ibhethri yendabuko?
Lo mbuzo impela nentshisekelo umthengi ngamunye ezingaba, okuyinto ngempela okunengqondo. Kakhulu ukuthi kungaba ubuwula kanjani ukuthenga umkhiqizo, engaqondi ukuthi izici nokungafani main kusuka izixazululo bendabuko. Sonke siyazi ukuthi ibhethri zamanje nomthofu-acid kugeleza amapuleti emihle nemibi, futhi odabula electrolyte, elisetendeni isimo uketshezi. Ukuvimbela izifunda okufutshane ekwakhiweni inikezwa a isihlukanisi plastic elise phakathi ipuleti emihle nemibi.
Kodwa kubalulekile ukuba iphawule yakho yokuthi ibhethri gel idivayisi Kuthi ezahlukene. Umehluko omkhulu itholakala lokuthi ukuthi electrolyte lisesimweni uqweqwe bese kufana jelly (gel). Ngesikhathi imboni a electrolyte omisiwe ngokukhethekile, futhi ngesikhathi operation ke kancane kancane osemanzi. Ngenxa isakhiwo zayo eziyingqayizivele, le electrolyte akusho shabalala futhi njalo emzimbeni. Kepha-hydrogen umusi nomoya-mpilo, okuyinto akhiwa yokusabela chemical ngesikhatsi kokuhlinzwa, bona siguqulelwa amanzi kamuva angena gel. Le nqubo ibizwa ngokuthi recombination. valve akhethekile izindlu ngokuchitha le overpressure. Njengoba ubona, ishaja gel ibhethri esingavamile ngempela, nakuba isimiso amabhethri bendabuko agcinwe. Awu, manje amaphuzu ambalwa ezithakazelisayo.
Omunye umbhangqwana izici sebhetri gel
Asazi nokuthi lolu hlobo ibhetri has a isihlukanisi engavamile kakhulu. Yena eyenziwe ngepulasitiki microporous, lapho engezwa aluminium izithasiselo.
Lokhu kukunika ukuzinza ekhethekile ukwahlukanisa endaweni enobudlova futhi kunciphisa ukumelana kwangaphakathi. Ngaphezu kwalokho, isihlukanisi amelana vibration imithwalo, futhi umonakalo mechanical, okuyiwona amaphuzu aphezulu wathola ochwepheshe kanye okubuyayo. Gel ibhethri unesinye isici esiphawuleka - sengisiza ephezulu msulwa ngezithako zawo. kakhulu lokhu sekunyuse ukusebenza kwe-athikili.
Yiqiniso, iningi kudivayisi omuhle impendulo ingemukelwa ukuze sibe nomzimba omuhle, futhi izici zayo eziyingqayizivele. Isici esiyinhloko kuba ngokukhuphuka kwenani nowe "icala / osenyameni" futhi, ngenxa yalokho, ukuphila isikhathi eside. abashayeli abaningi bathi iyunithi siphela iminyaka ngaphandle ukwehluleka futhi, ngaphandle kokungabaza, a okubuyayo. Gel ibhethri zingagcinwa isikhathi eside usesimweni akhishwe futhi efakwe hhayi kuphela esimweni enezingqimba. Konke lokhu kwenza umkhiqizo eyingqayizivele ngezinhlobo zayo. Futhi manje sizoxoxa ukuthi, eqinisweni, cabanga okunjalo abanikazi imoto ibhethri.
Gel imoto ibhethri: ukubuyekezwa abanikazi
Lesi sigaba ethile ethakazelisa ngokukhethekile. Iqiniso lokuthi ngokuvamile ibhethri gel ogibele izimoto, kokubili yizimpahla futhi abagibeli. Isizathu siwukuthi thuluzi sinesikhundla esikhulu ekuphileni isikhathi eside. Nokho, enkulu plus abashayeli ukubona ukuthi wamanje inrush lingaphezulu kakhulu kunalelo amabhethri ezivamile. Lokhu kuqakatheke khulu e extreme sezulu izimo, njengalapho frost okusezingeni eliphezulu. Ayikwazi ukwenza ngaphandle ibhethri, bese abantu abathanda ukufaka izesekeli imoto ngesimo subwoofers, umoya isimo nokunye. N. Kulokhu, ijeli iyadingeka ukuze ibhethri wemoto. Izibuyekezo bathi leli thuluzi kungaba usizo kakhulu enkulu kagesi ukusetshenziswa.
Kodwa abashayeli abaningi bathi ku-ibhodi electronics kumele kube eqondile kakhulu. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi akukho ngisho ingxoxo mayelana nendlela ukufaka ibhethri ijeli imoto production ezifuywayo, ikakhulukazi "zabuna". Ngakho, lo voltage icala kufanele kube njalo, cishe 14.4 V On Vaz izimoto, futhi ezinye izimoto angaphandle, lesi sibalo ingahluka ku ezahlukene 13-16 V, okuyoholela ukwehluleka ibhethri. Noma kunjalo, ngaso sonke isikhathi kukhona impendulo ocacile, ijeli ibhethri, kwezinye izimo ngokushesha liwohloka uma lilondolozwe unomphela at okushisa sub-zero (esingaphansi -20 degrees Celsius).
Indlela ukukhetha ishaja nebhethri
Noma yimuphi, ngisho arcade ibhethri ngesinye izohluleka uma icala ngendlela efanele. Kukhona ngeke isakwazi esetshenziswa inkumbulo ngokurhaba, njengoba ngokushesha setha esidabukisayo. Imali eningi kuholela ekuhlulekeni timphawu ibhethri, kanye yehlise amazinga electrolyte. Ngokwazi emiphumeleni elimazayo a wamanje amancane, khona-ke akuyona. Yiqiniso, ibhethri enjalo elikhokhisiwe isikhathi eside, kodwa lokhu kungaba neze ube nomthelela ongemuhle. Empeleni, ukuphila ibhethri kunqunywa zezemvelo lapho divayisi isetshenziselwa kanye ukushaja lesifanele. Ngenxa yalesi elula isizathu ishaja ngoba gel amabhethri kumele kube okuzenzela kanye nokugcina-wathenga. Ngaphezu kwalokho, kukhona cyclical futhi sesikhashana ukushaja izindlela ibhethri.
Kuqondane ukuthi kunesidingo esiphuthumayo ukusebenzisa ibhetri futhi lingashajwa. Kulokhu, ungakwazi ukusheshisa inqubo kancane. Nokho, uzodinga ishaja obukhethekile lokushisa limiter, okuyinto akufaki Ukushisa ibhethri. Ngaphezu kwalokho, it is kakhulu Kunconywa ukuba asebenzise timer futhi ukuthi akukho imali eningi. Sicela uqaphele ukuthi uma kukhona ishaja ifaniswe kahle gel amabhethri, empilweni yalo inkonzo eseduze ongafinyelela iminyaka 4-6. Futhi manje sibheke elinye iphuzu elibalulekile.
Indlela Ukushaja ibhethri gel
Lolu hlobo ibhethri, njengoba kwaphawula u-eziningana ngenhla benezingane eziningi izici zayo kanye nezici. Empeleni, kuba ikhambi ekahle ukufakwa on esikebheni, isithuthuthu noma imoto. Kodwa e- eziningi kuphakamisa imibuzo eminingi. Iphuzu umpofu ibhethri ezinjalo - ashona. Ngaphambi Ukushaja ibhethri ijeli, kumelwe ufunde indlela yokukwenza, bese kuphela uqhubeke. kufanele kulandelwe oyisisekelo, okuyinto kanje: voltage ukushaja ingeqi embundwini. Kugcine inketho ezimweni amabanga kakhulu kusuka 14.2 kuya 14.4, okuzokwenza icaciswe imiyalelo noma emzimbeni sebhetri.
It is hhayi Kunconywa ukuba uphazamisa inqubo ukushaja kufika ekupheleni. Lokhu kungenxa yokuthi njalo okulahlwayo isitoreji umthamo. Ngakho-ke, esikhathini esizayo uma ukushaja esikhundleni 100% ngeke uthole ezingaphezu kuka-95%, kanti lokhu akukuhle. Ungakhohlwa ukuthi isinyathelo sokuqala ukuthenga ishaja umile ngoba gel amabhethri. Kuyaphawuleka ukuthi kukhona kungenzeka voltage isiqondiso, futhi kukhona multi-esiteji ukushaja algorithm. Ngokuyinhloko, lokhu kuyiso sonke isibopho kungathiwani indlela Ukushaja ibhethri gel. Konke ulula.
Kuyini ishaja enhle?
Kunezinhlobo eziningana imithetho "segolide", okuyinto okumele niyazi. Ngakho, wena kuyoba lula kakhulu indlela futhi ukuthola idivayisi esifanele ukushaja gel ibhethri. Eqinisweni, akukho nzima, into esemqoka - ukuba banake izinto ezimbalwa sokunquma. Okokuqala, ingabe kungenzeka ukuba ufake futhi ulungise zamanje ukushaja. Ungase usho ukuthi namuhla zonke izinkumbulo une kungenzeka esinjalo, kodwa akuyona. Hhayi ukuthenga okuthile engavumelani nawe, ubuze umthengisi. Okwesibili, khona umsebenzi lokushisa isinxephezelo. Nokho, kubalulekile kuphela uma kwenzeka ukuthi ukushaja ibhethri Kwenziwa ekamelweni unheated. Izinga lokushisa isinxephezelo ayidingekile uma izinga lokushisa lize liba ngaphansi kwe-10 noma kunqoba 30 degrees Celsius.
Kodwa akugcini lapho. Kufanele uqaphele kakhulu ezigabeni icala, okuyizinto kumemori. Ukuze gel amabhethri, kufanele kube hhayi ngaphansi kuka 3. Esikhathini ukushaja esigabeni sokuqala Kwenziwa zamanje ngqo ngesikhathi voltage okwandisa wesibili - DC voltage nge nokuncipha zamanje. Isigaba sesithathu - imodi sesikhashana, okungukuthi, nokugcina isimo icala ibhethri. Uma idivayisi for ishaja gel ibhethri kuyoba ngaleyondlela, khona-ke wenze ukuthengwa kwesokudla.
Uyini umehluko Gel kanye AGM amabhethri?
Akuwona wonke umuntu uyazi ukuthi lezi ezimbili ibhethri ehluke ngokuphelele. Eyokuqala - ijeli, igama lesibili elihunyushwe ngokuthi "umswakama ingilazi uhlaka." Ngokwengxenye enkulu, phakathi amapuleti kuyinto-fiberglass. I 'eboshiwe "isimo electrolyte ingilazi ibekwe, ukuze ibhethri kungenziwa eziqhutshwa hhayi kuphela esimweni enezingqimba. Kuwufanele benaka yokuthi AGM amabhethri ungenayo into ukwenzani ijeli. Ngakho, ibhethri ingilazi uneminyaka engu-5 ubudala, lokhu okukhethwa eqolo, ezibizayo (umgwaqo) - iminyaka engaba ngu-10. Ligcinwe mayelana 200 amacala / udlala at 100% ukudedelwa imijikelezo 800 ngo-30% sokukhishwa ukujula. Uthi lokhu kunenzuzo ukugcina ngebhethri.
Gel amabhethri, okuyinto Izibuyekezo akhayo ngaphezulu, sesibuyekeze kakade. Silica gel - yamathebhu - has lenqwaba ikhule ezimbotsheni ukuthi zivimbela a electrolyte. Ngenxa ngokuphelele ukugcwala isikhala phakathi amapuleti siqedwa kungenzeka shorting noma ukuchitha amapuleti phambili. Musa kudidaniswe phakathi Jikelele nanokuthi Gel ibhethri, ngoba bengakwazi ngempela lutho esifana ngalo.
Okuncane izici gel amabhethri
Kakade eziningi liye wakhuluma yokuthi abathengi bathini mayelana Gel-amabhethri. Kungenzeka uye waphawula ukuthi ukusebenza kwalezi amabhethri impela high, ikakhulu lapho uqhathaniswa amabhethri bendabuko. Konke lokhu kubangela umonakalo omkhulu obangelwa amadivaysi. Ngakho? LX 12-105MG 105 A / h kubiza cishe 12 000, onobuhle namandla kakhulu brand efanayo, isibonelo, at 260 A / h kuyoba for 28, 000 nangaphezulu. Akubalulekile waphinda ukukhuluma ngalokho kuxhomeke kakhulu ezinyathelweni umakhi. Uma gel amabhethri izimoto zokukhiqiza yasekhaya zinenani, le nozakwabo ezibizayo angaphandle ngu 10-20%.
Ungakhohlwa ukuthi une ukuthenga ishaja ekhethekile. Kufanele ube nenamba izici okuyinto thina kakade olukhulunywa. Kungakuhle gel ibhethri ukushaja kufanele lungabi naphutha kakhulu, ngaphandle pulses nekhwalithi high voltage. Kubaluleke kakhulu ukugwema okweqile kanye abantu imali eningi, njengoba lokhu kunomthelela ongemuhle kulolu hlobo ibhethri. Ukuze abashayeli kuyoba ezithakazelisayo kanye neqiniso lokuthi ukuntuleka izindawo ungakwazi abeke ibattery isikhundla lapho wena ukhululekile. Yiqiniso, akunakwenzeka ngokuphelele ukuze ujike, kodwa ohlangothini ukubeka akekho azenqabelayo.
On amanani, futhi enye into
Njengoba siqonda ngokugcwele idivayisi kanye yokusebenza Umgomo we ijeli amabhethri, kuyoba ezidingekayo ukusho amazwi ambalwa mayelana ukubaluleka amayunithi ezinjalo. Ngokushesha uqaphele ukuthi: lesi ibhethri akukwazi ezishibhile. Uma sicabanga sha ibhethri Ukukhanya kwelanga Amandla Gel at 62 A / h, ngeke ukhokhe ruble ecishe ibe yizinkulungwane 8-9. Ngesikhathi esifanayo, nse, kodwa bendabuko nomthofu-acid amabhethri izobiza ruble akukho kuka 4-5 ayizinkulungwane. Omunye akufanele bayakhohlwa AGM, okuyizinto izimbangi Gel. Kuwufanele benaka yokuthi amabhethri ingilazi indwangu ishibhile 20-30% kunanoma ijeli, futhi wawungaphansi yokugcina kuphela isibalo icala / ukutjhatjhululwa. Lapha futhi ngicabange ngalokho. Iqiniso ukuthi izici gel amabhethri ahlukile, futhi amakhono tekusebenta balungile, kodwa intengo zinsizakuphila likhulu kakhulu.
Lapha sahlola umbuzo isithakazelo. Njengoba cishe waphawula, naphezu kwezinkinga elalibhekene okubuyayo iningi abanikazi ungalilahli njalo kuyancomeka ukuthenga gel amabhethri. Imininingwane Yiqiniso, ngesikhathi ibambene, futhi kwezinye izimo kuba okukhipha evamile kuphela. Ngokwesibonelo, ne ngqo Electrics ugibelile futhi inani elikhulu imishini emotweni noma esikebheni, kungenzeka ukuba ufake ibhethri ezifana uhlelo. Uma usebenzisa imoto at -20 noma ephansi, ibhethri gel isisetshenziswa kuyoba aphansi ukwedlula amangalelwe. Yiqiniso, ngenxa ngokukhetha kuphela, kodwa udinga ukuthi ucabange izikhathi eziningana ngaphambi kokuba wenze lolu hlobo lokuthenga. Ngaphezu kwakho konke lokhu, futhi udinga ukuthenga ishaja ukuthi izobiza ruble okungenani 3 million. Uma ufuna ukuphila isikhathi eside osenyameni ezijulile, kungcono ukuba ukhethe gel amabhethri. Izibuyekezo bathi namuhla ngezinjongo ezinjalo ingenye izixazululo engcono.
Izindlela zakamuva of "Lada": izici kanye ukumisa, abanikazi langempela
Ukudala iKhadi Lebhizinisi